UC Merced: I-GPA, i-SAT, kunye noMTHETHO I-Scores yo kwamkelwa
Imilinganiselo ye-UC Merced Admissions
I-UC Merced GPA, izikolo ze-SAT kunye noMTHETHO Ukwazisa ukungena. Idatha efanelekileyo yeCapepex.
Ngenxa yokuba isikolo esincinane esasakha igama layo, u- UC Merced nguye ongakhethayo kwiziko leYunivesithi yaseCalifornia . Baye bavuma malunga nekota yesithathu sabo bonke abafake izicelo ngo-2016.
Uvavanyo lwamanqaku aphakathi kwama-50 ekhulwini kwabafundi bokuqala ababhalise ngo-2016 be:
SAT Ukufunda okubalulekileyo: 420 ukuya ku-420
ISAT Math: 450 ukuya ku-550
UMTHETHO WOMTHETHO: 19 ukuya ku-24
UMTHETHO ISingesi: 18 ukuya ku-23
UMTHETHO UMathe: 18 ukuya ku-25
Kumele ube ne-GPA ye-3.0 okanye bhetele ngokusekelwe kwizifundo zakho ze-AG ezigqityiweyo. Ungathatha umThetho kunye noVavanyo lokuBhala okanye uVavanyo lweSAT UkuHlola. Ungasebenzisa i-SAT yezifundo iimvavanyo ukuwanelisa iimfuneko ze-AG okanye ubonise ukuphatha kwakho isihloko esithile. Ukuba ungumfundi wendawo, yinto edibeneyo yokunyulwa kwiipesenti ezili-9 zeklasi lakho.
Iikhosi ze-AG kufuneka uzalise iquka iminyaka emibili yeMbali / iNzululwazi yeNtlalo, iminyaka emine yesiNgesi, iminyaka emine engaphantsi (iminyaka emine incomo) yeMathematika, iminyaka emibini ubuncinane ) lweelwimi Ngaphandle kweNgesi, unyaka owodwa wobuGcisa bokuBonakala kunye noBugcisa, kunye nonyaka owodwa wokukhetha ukhenketho. Iiklasi ezilishumi elinanye kwezi-15 kufuneka zigqitywe ngaphambi komnyaka wakho ophezulu.
Amanqaku akho okuvavanya akwabelwana ngazo zonke iipampus zaseYunivesithi yaseCalifornia, ngoko ukuba uyithumele kwelinye, abanye baya kuyibona. Ixesha lokufayilila ngoNovemba 1 ukuya kuNovemba 30 njalo ngonyaka ukwenzela ukuba le semester ilandele.
Unokulinganisa njani kwiYunivesithi yaseCalifornia Merced? Bala amanani akho wokungena kunye nale sixhobo samahhala esuka kwiCappex.
UC Graced Admissions Graph
Kwigrafu ngasentla, amachaphaza aluhlaza kunye nebalahlaza abamele abafundi bamkelekile. Uninzi lwabafundi abangena kwi-UC Merced babenamaGPA angama-3.0 okanye ngaphezulu, ama-SAT amanqaku adala (RW + M) angama-950 okanye ngaphezulu, kunye neM ACT amanqaku angama-18 okanye ngaphezulu. Gcina ukhumbule ukuba kukho amachaphaza ambalwa ebomvu efihliweyo emva kohlaza okwesibhakabhaka nokuluhlaza, ngoko abafundi abathile ngamabanga kunye nokuvavanya amanqaku ekujoliswe ku-UC Merced basenokuthi banqatshelwe. Izizathu zokurhoxiswa zingahla kwizinto ezininzi-ikharityhulam yekharityhulam ephakamileyo eyayiyinselele, ukungabikho kokubandakanyeka kwangaphandle, okanye isicatshulwa esibi.
I-UC Merced, njengezikolo zonke ze-UC, ziyakwamkelwa ngokupheleleyo , ngoko ke amagosa avunyelwe ukuvavanya abafundi asekelwe ngaphezu kwedatha yamanani. Unokuphucula amathuba akho wokumkela ngokuthatha iikhosi ezinzima , ukuthatha inxaxheba kwimisebenzi yentsuku ekhethiweyo , kunye nokubhala iincwadana ezithandayo .
Ukuze ufunde kabanzi malunga ne-UC Merced, ii-GPA zezikolo eziphakamileyo, izikolo ze-SAT kunye nama-ACT, amanqaku angancedisa:
Iprojekthi ye-UC Merced Admissions
I-GPA neeGraphic Score zeGrafu zezinye izikolo ze-UC
Elipheleleyo Uluhlu lweeNqweliso eziPhezulu kwiBhokisi lokuSebenza
Isithunywa Sengelosi: Ukuthandaza kwiNkulumkankulu yaseZadkiel